कुनै पनि मौसम मा, हाम्रो खुट्टा आक्रामक कारक उजागर छन्। एक हात मा एक बलियो र कहिलेकाहीं धेरै सहज छैन जूता अन्य मा, एक उपाध्यक्ष मा संकुचन - blisters को गठन को बढावा जो निरन्तर तापमान परिणाममा अत्यधिक डराएको मा परिवर्तन। लगभग हरेक व्यक्तिलाई कसरी खुट्टा मा कर्न्स उपचार गर्न को प्रश्न रुचि। निस्सन्देह, यो कुशलतापूर्वक खुट्टा हेरचाह, उनको घटना बच्न सबै भन्दा राम्रो छ। महिला जुत्ता एडी को संख्या र यो बिताएको समय कम गर्नुपर्छ। तर समस्या पहिले नै अवस्थित छ भने, यो आवश्यक सबैभन्दा प्रभावकारी चयन गर्न (तपाईंले व्यक्तिगत तवरमा लागि) अर्थ छ।
खुट्टा फार्मेसी लागूपदार्थ मा कर्न्स कस्तो व्यवहार गर्ने?
यो प्रश्न प्रत्येक फार्मासिस्ट मदत गर्न सक्छ, त्यसैले सल्लाह लागि अनुरोध गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। आज Windows nanodiamonds उपयोग गरदै, क्रीम, मलहम, पाउडर र यति मा को रूप मा विभिन्न लागूऔषधको व्यापक दायरा औषधि पसल। यी दबाइहरु को सबै जोडती मुख्य घटक त्यहाँ एक मृदुकरण कुनै न कुनै छाला र यसको थप detachment छ कारण जो salicylic एसिड छ। राम्रो उपचार कर्न्स खुट्टा यसको संरचना मा समावेश विशेष अलसी, अरंडी, र मकै साथै रूपमा तरकारी तेल को अद्वितीय संरचना, Benzoic एसिड र Glycerol। तपाईं ठीक गोंद प्याच आवश्यक सिद्ध परिणाम प्राप्त गर्न: पूर्व-खुट्टा बाफ बाहिर, त्यसपछि त यो जारी गर्न क्षति सामान्य प्याच को ठाउँमा छडी, एउटा सानो प्वाल पनि मकै को आकार कटौती। मात्र यो हेरफेर पछि कर्न्स को क्रीम लागू र विशेष टास्ने शीर्ष मुहर गर्न सकिन्छ। यो रातको लागि बाँकी छ जो र्याप, एक प्रकारको बाहिर जान्छ। बिहान पैच हटाइएको र निर्दिष्ट क्षेत्र pumice संग उपचार गरिएको छ। यसरी कुनै न कुनै छाला softens र यसलाई हटाउनुहोस् गर्न सजिलो हुनेछ, र कल्याण क्षेत्र छैन क्षतिग्रस्त हुनेछ।
को स्नान प्रयोग गरेर खुट्टा मा कर्न्स कस्तो व्यवहार गर्ने?
माथिको उल्लेख रोग को छुटकारा रही को गैर-परम्परागत विधिहरू को Adherents नियमित आधारित साबुन-सोडा मा खुट्टा स्नान औषधीय गर्न सल्लाह छन्। सामाग्री निम्न अनुपात मा प्रकार: पानी को एक लीटर बेकिंग सोडा तीन चम्मच हुनेछ र एक चमचा साबुन rubbed। परिणामस्वरूप मिश्रण खुट्टा छोड्नु र एक घण्टा, त्यसपछि roughened अंश pumice संग उपचार र शुद्ध पानी धोए बारेमा hover। राम्रो सिद्ध खुट्टा स्नान समुद्र नुन र पोटासियम Permanganate संग। तिनीहरूले दुखाइ कम गर्ने एक महान मद्दत थियो। यो पनि आधा एक घण्टा खट्टे दूध मा आफ्नो खुट्टा डुबाउनु गर्न त ग्लिसरीन र अरंडी तेल को एक लोशन तिनीहरूलाई चिकनाना हरेक दिन सुत्न जानुअघि सिफारिस गरिएको छ।
कसरी परम्परागत चिकित्सा को माध्यम द्वारा खुट्टा मा कर्न्स उपचार गर्न?
रात compresses बारे मा भूल छैन। सबैभन्दा लोकप्रिय संघटक कच्चा आलु छुट्याउन सक्नुहुन्छ रूप मा, grater मार्फत shredded। Gruel एक sprained टखने, माथि वेयर मोजा pribintovyvayut र शान्तिमा ओछ्यानमा जानुहोस्। खुट्टा छाला को बिहान नरम र मखमली छ। धेरै मानिसहरू अत्यधिक पाँच दिन भित्र रोग बाट स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी कि नुस्खा प्रशंसा गरे। यो वनस्पति तेल र सिरका चम्मच एक चम्चा को वाहेक एक अन्डा आधारित चिकित्सा लेप तयार गर्नुपर्छ। यस्तो मिश्रण फ्रिज मा दिन भर पीसा छ, त्यसपछि ओछ्यानमा जानुअघि छाला हेरविचार खुट्टा लागि सामान्य क्रीम रूपमा प्रयोग।
Carotid धमनी "निद्रामा" होइन!
Dialysis - उचित उपज मृगौला रोग उपचार
गर्मीमा बिरुवामा के तपाईं बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ?
Windows को लागि जीसीसी संकलक
रातो-eared Sliders लागि Terrarium: आवश्यक उपकरण
ज्ञान स्रोत के हुन सक्छ? भौगोलिक ज्ञानको स्रोत